Tsimok'aretina coronavirus :: Olona efatra naiditra hopitaly noho ny ahiahy • AoRaha
Tsimok’aretina coronavirus Olona efatra naiditra hopitaly noho ny ahiahy
Mbola tsy nahitana trangana tsimok’artina “Coronavirus” hatreto eto Madagasikara. Efatra ireo olona noahiana ho misy ny soritra aretina ka nalefa teny amin’ny hopitaly Anosiala. Natao fitiliana sy narahi-maso akaiky ny fahasalamany.
Voamarina tamin’ny fitiliana natao azy ireo fa tsy voan’ny tsimok’aretina ireo olona ireo. Nanamafy ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny minisiteran’ny Fitaterana fa mitohy ny fanaraha-maso ataon’izy ireo mba hisorohana ny fidiran’ny “Coronavirus” eto Madagasikara.
“Nisy olona efatra nentina teny amin’ny hopitaly Anosiala saingy efa salama avokoa izy ireo. Tsy trangana “Coronavirus” na iray aza fa nampiahiahy. Tsy maintsy naka fepetra ny minisitera tamin’ny fandraisana an-tanana an’ireo olona ireo. Natao ny fitsaboana sy ny fitiliana ka tsy nisy ny porofo ny fitondran’izy ireo ilay tsimok’aretina. Mbola tsy nisy aloha ireo natoka-monina fa ireo nalefa teny Anosiala ihany”, hoy ny profesora Solofomalala Gaetan Duval, tale jeneralin’ny tolotra ara-pahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Nohamafisiny fa rehefa misy ny tranga mampiahiahy, vao hampidirina eny amin’ny hopitaly. Atao ny fitsaboana sy ny fitiliana ary ny fanaraha-maso akaiky. Efa ananana kosa ny mombamomba an’ireo olona avy any ivelany ka tsy nahitana ny soritra aretina. Misy ny antso atao amin’izy ireny raha ohatra ka miharatsy ny toe-pahasalamany na koa misy tranga mampiahiahy.
Nanamafy ny fanambaràna iombonana natao tamin’ny 3 febroary 2020 ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, profesora Ahmad Ahmad, ny minisitry ny Fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro, Randriamandranto Joël ary ny Vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS), tetsy Ambohidahy, omaly.
Fitsabahana fitateram-bahoaka :: Misy misandoka ho taksiborosy ireo mpitatitra mpizaha tany
Fahitana razana :: Vehivavy, 75 taona, nisy namono tany an-tsaha